မာ့ခ်၏ ကိုယ်ပိုင် အတဿ္တများ: အလကားမရ၊ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုး
ရေးသားသူ : မာ့ခ် နေ့စွဲ : Monday, September 21, 2009
!! ငါ့ကို မဟုတ်တာ လာပြောသူတွေ
!! အသေဆိုးနဲ့သေပါစေ။ ”...........တဲ့
there is some devils around there,
thats why I put that :P